War-Murtiyeed ka soo baxay shirkii Golaha Wasiiradda Dawladda Puntland
Garoowe:-Shirkii Golaha Xukuumadda Dawladda Puntland oo uu shir-guddoominayay Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa looga hadlay Amniga Puntland, sidii wax looga qaban lahaa khatarta kaallimaha shidaalka ee magaalooyinka waaweyn iyo Xeerka Shaqada iyo shaqaalaha Puntland.
Golaha xukuumadda ayaa shirkoodii maanta ku dheeraaday amniga iyo difaaca dalka iyo sidii looga sifeyn lahaa Puntland ururada argagixisada ah, golaha ayaa caddeeyay in amniga iyo difaaca Puntland ay yihiin muqadas, isla markaana laamaha amnigu ay si joogta ah uga hortagaan dhammaan kharaha dalka soo wajahan,
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku tilmaamay arintaan dhacdo xanuun badan oo shacabka Puntland soo martay ayna waajib tahay in si dhab ah looga hortago khatartaan, wuxuuna Madaxweynuhu ku dhawaaqay guddi wasiiro ah oo si dag dag uga hawl-gala waxka qabadka qatarta kaallimaha shidaalka iyo u-gurmadka dadkii wax-yeeladu soo gaadhay, guddigaan oo kala ah wasiirka Arimaha Gudaha, wasiirka Amniga, wasiirka Shaqada iyo Shaqaalaha, wasiirka Caafimaadka iyo wasiirka Ganacsiga.
Wasiir Dowlaha dekedaha Puntland Axmed Saciid oo lagu dhaawacay Boosaaso
Boosaaso:-Wararka naga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in Wasiiru dowlihii wasaaradda dekaddaha Puntland, Axmed Saciid galabta lagu dhaawacay magaalada Boosaaso.
Rag hubaysan ayaa rasaas ku furay gaari uu la socday Wasiiru dowlihii wasaaradda dekaddaha Puntland, Axmed Saciid waxaana dhaawaca uu ka gaaray gacanta iyo feeraha waxaana haatan xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayaa isbitaalka magaalada Bosaaso.
Ciidamada Ammaanka Puntland ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku dhigeen kooxdii dhaawacday Wasiiru dowlihii wasaaradda dekaddaha Puntland, Axmed Saciid.
Warar is Khilaafsan ayaa ka soo baxaya cida dhaawacday Wasiiru dowlihii wasaaradda dekaddaha Puntland, Axmed Saciid wararka qaar ayaa sheegaya in askar ka tirsan ciidanka amaanka oo rasaas furay ay si qaldan u dhaawaceen .
Jaamacadda bariga Afrika iyo horumarka ay ka samaysay dhanka Tiknooloojiyada cusub.[Masawiro/Video]
Wed, 01/31/2018 - 13:38
Boosaaso:-Galbnimadii isniinta 29/1/2018 ayey ku guulaysteen gudiga ardayda ee dhinaca IT-ga inay kiciyaan diyaarada nooca daroonis-ka ah oo qabanaysa adeegyo kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin dhinaca qaadista filimida iyo muuqaalada iyo adeegyo kale. Diyaaradda oo jaamacadu sanadkaan ku soo kordhisay laababkii agabka tiknooloojiyada ee ardaydu ku tabobaran jireen, gaar ahaan ardayda barata information tecnology-ga iyo ingneering-ka IWM ayaa waxaa kale oo loo adeegsan doonaa qaybaha cilmi baarista iyo anshida kala duwan ee Jaamacadda, waxaan kale oo ka maqnayn in looga faaiideeyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed.
Si kastaba ha ahaatee Jaamacadda ayaa waxaa ka go’an in ay la jaanqaado horumarka Aadanuhu gaaray oo fududaynaya adeegyada nolosha si ay u soo saarto aqoonyahan maarayn kara caqabadaha umadda hortaagan.
Hoos ka Daawo Jaamacadda bariga Afrika iyo horumarka ay ka samaysay dhanka tiknooloojiyada cusub.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo magacaabay Guddiga xalinta Cabashooyinka Dawladda.
Wed, 01/31/2018 - 11:57
Garoowe:-Digreeto kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu magacaabay guddiga xalinta cabashooyinka Dawladda Puntland, kadib markii ay kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Digreeto Xeer Madaxweyne Lr. 06 January 29, 2018, kuna saabsan Magcaabida Guddiga Xalinta Cabashooyinka Dawladda Puntland.
Markuu Arkay: Baahida loo qabo magcaabida gudida xalinta cabashooyinka Dawladda.
Markuu arkay: Markuu arkay baahida loo qabo xafiiska ilaalinta cabashooyinka muwaadiniinta Puntland guud ahaan gaar ahaan shaqooyinka imtixaanka loo galo.
Markuu Tixgeliyay: In lahelo caddaalada guud oo loo siman yahay.
Markuu Tixgeliyay: Aqoontooda iyo waayo aragnimadooda shaqo.
Waxaa loo magcaabay gudiga xalinta cabashooyinka dawladda Puntland oo ka kooban shan xubnood.
1 .Cabdiraxmaan Cali Guureeye : Agaasimaha guud ee maamulwanaaga iyo ladagaalanka musuqmaasuqa – Gudoomiye.
2 .Jaamac Maxamed Cismaan: Guddoomiyaha Hanti Dhawrka – Guddoomiye ku xigeenka
3 .Cabdirisaaq Nuux Maxamed :Agaasimaha Guud Ee Haweenka – Xubin.
4 .Maxamed Muuse Ismaaciil : Garyaqaanka Guud Ee Dawladda – Xubin.
5 .Ciise Maxamuud Cumar :Aagaasimaha shaqada Iyo Shaqaalaha Madaxtooyada – Xubin.
XAFIISKA WARFAAFINTA,WACYI-GELINTA, HIDDAHA IYO DHAQANKA EE MADAXTOOYADA DAWLADDA PUNTLAND.
Madaxweynaha Jubaland oo magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda sare.
Tue, 01/30/2018 - 19:53
Kismaayo:-Madaxweynaha Maamulka JIland Axmed Maxamed Islaam ayaa labo digreeto kukala magacaabey Xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland wuxuuna u magacaabay Maxamed Sh Cusmaan Siciid halka gudoomiyaha maxkamada sare uu u magacaabay Sheekh Cabdishakuur Ibraahim Cabdi.
Madaxweynaha JFS oo dalka dib ugu soo laabtay kadib Shirkii Midowga Afrika
Tue, 01/30/2018 - 15:38
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, kadib markii uu ka qeybgalay Shir-Madaxeedkii 30-aad ee Midowga Afrika, oo shalay lagu soo gabogabeeyey magaaladda Addis Ababa ee Caasimadda Itoobiya.
Mon, 01/29/2018 - 19:36
Addis Ababa:- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulamo gaar gaar ah la qaatay qaar kamid ah Madaxda ka qeybgalaysa Shir-Madaxeedka 30-aad ee Ururka Midowga Afrika ee ka dhacaya Magaalada Addis Ababa, waxaana uu la kulmay Madaxweyneyaasha waddamo ay Soomaaliya xiriir dhow leeyihiin, iyaga oo ka wadahadlay xiriirka labada dal iyo sidii loo sii horumarin lahaa.
Muqdisho:-Hay’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa baaq nabadeed u diray madaxda S/land iyo Puntlad iyagoona ugu baaqay in colaada ka dhex jirta lagu dhameeyo wada hadal waxaan ay labada dhica ugu baaqeen in laga fogaado in dhiiga dadka shacabka ee muslinka ah uu isku daa.
Hoos ka Akhriso baaqa nabaded ee Hay’adda Culimada Soomaaliyeedu direen Madxada Puntland iyo S/land
Mon, 01/29/2018 - 12:54
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo Maanta Dib ugu soo Laabtay Dalka (Masawiro)
“Waxaan la kulmay madaxda Sanduuqa Lacagta Caalamka ee IMF iyo Bangiga Adduunka oo aan kala hadlay sidii dalkeenna deymaha looga cafin lahaa, waxayna qirayn in Soomaaliya ay samaysay tallaabooyinkii loo baahnaa , kuna taaggan tahay jidkii deymaha looga cafin lahaa.” Ayuu yiri R/W khayre.
Madaxweyne Farmaajo oo Khudbad ka jeediyey Shir-Madaxeedka Midowga Afrika (Masawiro)
Sun, 01/28/2018 - 19:57
Addis Ababa:- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyey Shir-Madaxeedkii 30-aad ee Midowga Afrika, oo maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la yeeshay wafdi ka socda Midowga Yurub (Masawiro)
Sun, 01/28/2018 - 19:47
Addis Ababa:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku guda jira kulamada gaar gaarka ah ee uu la qaadanayo Madaxda Afrika iyo wakiilada Ururada Caalamiga ah ee ka qeyb galaya Shirka Madaxda dalalka Midowga Afrika, ayaa la kulmay Wafdi ka socday Midowga Yurub.
Sun, 01/28/2018 - 14:15
Addis Ababa:– Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan Magaalada Addis Ababa ee caasimadda Itoobiya, halkaas oo uu ka qeyb galayo Shir-Madaxeedka Caadiga ah ee Midowga Afrika, ayaa waxa ay kulan gaar ah yeesheen Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay António Guterres.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa bogaadiyey horumarka la taaban karo ee Dowladdu ka sameysay dhinacyada siyaaadda, amniga iyo dib u heshiisiinta.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhiniciisa sheegay in Dowladda ay ka go’antahay sii xoojinta dib u heshiisiinta iyo xasillina dalka, isaga oo intaas ku daray Madaxweynuhu in ay muhiim tahay in Qaramada Midoobay ay dardargaliso caawimaadda ay siiso Soomaaliya.
Ugu dambeyn Madaxweynaha iyo Xoghayaha ayaa isla soo qaaday meesha ay mareyso u diyaarinta ciidamada Soomaaliya in ay amniga dalka la wareegaan , Xoghaye Guterres ayaana qiray in Ciidamada Soomaaliya ay yihiin kuwo la isku hallayn karo oo u baahan in la taageero oo kaliya , waxa uuna hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in Qaramada Midoobay ay gargaar dhinaca bini’aadanimada ah gaarsiin doonto Soomaaliya.
Sat, 01/27/2018 - 20:25